Asked by scm999 3 emasontweni adlule
Answered by scm999 5 ezinsukwini ezidlule
Ever since installed Ubuntu 18.04.5 LTS (& latter upgraded to Ubuntu 20.04.2 LTS), I am unable to watch YT live videos! Below are the screenshots of the issue & a… (funda kabanzi)
Asked by contact.rishikmr 1 isonto elidlule
Answered by jonzn4SUSE 3 ezinsukwini ezidlule
Asked by bpaquereau 4 ezinsukwini ezidlule
Asked by frankp 5 ezinsukwini ezidlule
Answered by dimithrandir 4 ezinsukwini ezidlule
Asked by Nafeesa 6 ezinsukwini ezidlule
My firefox version is 78.9-esr As attachment, Japanese and Chinese character will be messed up. I have tried to install different fonts like fonts-arphic-ukai and fonts-a… (funda kabanzi)
Introduction So I learned the hard way to never run sudo apt remove python3 on an ubuntu system. I'm running Linuxlite (Ubuntu 20.04.2 LTS) on a dell desktop (unsure of t… (funda kabanzi)
Asked by maximorainwater9 1 isonto elidlule
Asked by john588 1 isonto elidlule
I am having issues playing back video on certain sites using both FireFox Developer edition and Regular Fire Fox Every time I try to play a video on these sites I get th… (funda kabanzi)
Asked by Vega Codex 1 isonto elidlule
I know this question has been asked before but I am hoping for an update and maybe to learn something new to try... I installed the latest Firefox (April 2021) on Ubuntu … (funda kabanzi)
Asked by flexmcmurphy 2 emasontweni adlule
Answered by flexmcmurphy 2 emasontweni adlule
i have been logged out of some of the sites often. i have a wattpad account and i am constantly logged out of it. in case i try to log back in, i discover my previously s… (funda kabanzi)
Asked by Vulpa 2 emasontweni adlule
While youtube videos is flawless, facebook videos seem to play at 15fps. Audio plays flawlessly though.. It happens with both CentOS and RHEL. I'm using the flatpak versi… (funda kabanzi)
Asked by XxTriviumxX 2 emasontweni adlule
Answered by XxTriviumxX 2 emasontweni adlule
Asked by boku 2 emasontweni adlule
Asked by lannex 2 emasontweni adlule
Answered by Sinsang 2 emasontweni adlule
Asked by margochester 2 emasontweni adlule
Answered by landak123 2 emasontweni adlule
In new version of Firefox I can't get the view pocket list button under the bookmarks. The changelog of the new version says that this function was removed because it has… (funda kabanzi)
Asked by Dayls 2 emasontweni adlule
Ever since I signed up for Firefox sync, I have been berated with emails from them asking me to sync more devices. I really do not want to receive marketing emails from M… (funda kabanzi)
Asked by owen8 2 emasontweni adlule